NordVPN कालो शुक्रवार २०२० -% 83% अफ (आश्चर्यजनक सम्झौता) - प्रस्तावहरू
के तपाई यस समयमा पूर्ण VPN सेवा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हो, इन्टरनेट खतरनाक स्थान बनिरहेछ, र VPN सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा हुन सक्छ। जहाँसम्म, प्रीमियम VPN महंगा हुन सक्छ, जबकि निःशुल्क VPN केहि राम्रो छैन। त्यसो भए तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ?
यो समय तपाइँको गोपनीयता र इन्टरनेट को सुरक्षा को लागी सबैभन्दा विश्वसनीय VPN प्रयोग गरी बढाउने समय हो! Nord VPN यसको विशेष मूल्य निर्धारण र यसको लागि प्रस्ताव संग तपाईंलाई मोहित बनाउन तयार छ कालो शुक्रबार र सम्भवतः साइबर सोमबार!
तपाईंले VPN किन प्रयोग गर्नुपर्छ? के ब्ल्याक फ्राइडे वास्तवमै यो Nordvpn को लागी लायक छ? किन तपाइँ Nordvpn छनौट गर्नुपर्छ? यदि तपाईंसँग यी सबै प्रश्नहरू छन् भने, त्यसपछि अगाडि पढ्नुहोस्! हामी तपाईलाई पूरा उत्तर र अधिक ल्याउँदैछौं!
यहाँ छ तपाइँ NordVPN कालो शुक्रवार को बिक्री को बारे मा थाहा पाउनु पर्छ सबै कुरा।
Nordvpn के हो?
Nord VPN प्रशंसनीय सेवाहरु को साथ एक वैश्विक स्तर VPN सेवा प्रदायक हो। चाहे तपाई सुरक्षित ब्राउज गर्न चाहानुहुन्छ वा सामग्री उच्च गतिमा स्ट्रिम गर्न चाहानुहुन्छ, यसले कार्य गर्दछ! नर्ड विश्वास गर्दछ कि सबैजना एक खुला तर सुरक्षित र निजी ईन्टरनेट अनुभव हुनु पर्छ। तसर्थ, NordVPN मा विशेषज्ञहरु कडाइका साथ काम गर्दै छन् तपाईलाई अत्याधुनिक VPN ल्याउन।
Nord over over भन्दा बढी देशहरूमा उपलब्ध छनौट गर्न around, 5००+ सर्भरहरूको साथ। यो निरन्तर इष्टतम साइबर सुरक्षा को लागी प्रयोगकर्ता मैत्री र द्रुत कनेक्शन सुविधाहरु लाई ल्याउन कोसिस गर्दछ। जहाँसम्म, यो एक प्रीमियम सेवा प्रदायक हो, यो अलि महँगो हुन सक्छ। त्यहि ठाउँमा ब्ल्याक फ्राइडे बिक्रीले तपाईंलाई महत्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।
नेटफ्लिक्सको लागि सर्वश्रेष्ठ VPN - स्ट्रिम जियोरेस्ट्रिकेटेड फिल्महरू र टिभी कार्यक्रमहरू
के Nord यस्तो महान VPN प्रदायक बनाउँछ?
Nord VPN ले तपाईंको डाटा लाई सुरक्षित सुरक्षाको लागि त्रुटिपूर्ण ईन्क्रिप्शनको साथ सुरक्षा गर्न सक्दछ। यदि तपाईं अनलाइन बैंकि or वा शपिंग अनलाइन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईंलाई VPN सेवा प्रयोग गर्नको लागि सर्वोपरि हुन्छ।
यसले सुविधाहरूको दायरा प्रदान गर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, Nord एक फर्म नो लग नीति अभ्यास। संसारमा जहाँ सबैले तेस्रो पार्टी विज्ञापन र सेवाहरूको लागि तपाइँको लगत प्रयोग गर्दैछन्, नोर्डले अनलाइन प्राइभिंगलाई हटाउन सक्छ। यो केवल अरूमा सीमित छैन, तर नर्ड आफैले पनि।
नर्ड विश्वव्यापी अनुकूल छ। यसैले तपाईले यसलाई विन्डोज, लिनक्स, एन्ड्रोइड, आईओएस वा म्याकोोसमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको स्मार्ट टिभी र अन्य नयाँ उपकरणहरूको लागि पनि, तपाईं नर्डमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। एकल सदस्यताले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा सुरक्षाको लागि devices उपकरणहरू जडान गर्न अनुमति दिन्छ।
स्वचालित किल स्विच, डबल VPN, DNS चुहावट संरक्षण, र साइबरसेक, धेरै अन्य सुविधाहरूको माझमा, Nord एक प्रकारको VPN सेवा प्रदायकको एक बनाउनुहोस्।
एक Nord VPN प्रयोगका फाइदाहरू:
VPN प्रयोग गर्नका अनगिन्ती लाभहरू छन्, विशेष गरी Nord VPN। प्रामाणिक प्रयोगको केहि सब भन्दा सम्मिश्रित कारणहरूको बारेमा कुरा गरौं।
१. तपाईंको डाटा सुरक्षित गर्नुहोस्:
तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि एप्पल र व्हाट्सएपले तिनीहरूको प्लेटफर्महरूको लागि अन्त-देखि-अन्त ईन्क्रिप्शन प्रयोग गर्दछ। यद्यपि यो अरू सबै कुराको लागि उपलब्ध छैन, आवश्यक छैन। फेसबुक र अन्य इन्टरनेट दिग्गजहरू पनि यस सुरक्षामा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्।
यदि तपाईं तस्विर र भिडियो सहित डाटा प्राय साझा गर्नुहुन्छ, तब VPN ले तपाईंलाई ईन्क्रिप्टेड सुरक्षा ल्याउन सक्दछ। यसको मतलब यो हो कि कुनै पनि ह्याकर वा अनुप्रयोगसँग तपाईको डेटा भण्डार गर्न कठिन समय आउँदछ। यसैले, तपाई उत्कृष्ट सुरक्षा पाउनुहुन्छ। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं एक मुद्रा संक्रमण आचरण।
२. कुनै अधिक प्रतिबन्धहरू छैनन्
केही वेबसाइटहरू, अनुप्रयोगहरू, र पोर्टलहरू क्षेत्रीय लकको कारण प्रतिबन्धित छन्। यदि तपाईंको देशले एक विशिष्ट वेबसाइट, खेल, अनुप्रयोग, वा प्लेटफर्म अवरुद्ध गरेको छ भने, तपाईं यसलाई VPN मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, स्ट्रिमिंग सेवाहरू जस्तै अमेजन, हुलु, र अन्यमा क्षेत्र-विशेष सामग्री हुन्छ। VPN प्रयोग गरेर, तपाईं ग्लोबल सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ अतिरिक्त लागत बिना।
Un. अज्ञात रहनुहोस्
VPN प्रयोग गर्ने उत्तम पक्ष यो हो कि यसले तपाईंको पहिचान फिल्टर गर्न सक्दछ एक पटक यो काम शुरू गरे। अर्को शब्दहरूमा, त्यहाँ कुनै डिजिटल छाप छैन जुन तपाईं पछाडि छोड्नुहुन्छ। एरगो, तपाई कुनै पनि चीज ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनी तपाईलाई मनपर्ने पनी तपाइँ चाहानुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि नर्डले या त लग भण्डार गर्दैन, तपाईं अनमोल अनमोल रहनुहुनेछ।
Sur. निगरानीबाट सेफगार्ड
तपाईले धेरै षडयन्त्रहरू भेट्टाउनुहुनेछ प्रत्येक व्यक्तिको डेटा प्रयोगमा सरकारी जासूसहरू। अर्को शब्दहरूमा, तिनीहरूलाई थाहा छ कि तपाईं के गरिरहनु भएको छ। उनीहरूलाई तपाइँको खोज इतिहास र इन्टरनेट गतिविधि थाहा छ। के हुन्छ यदि यो सबै सत्य हो? तसर्थ, यदि तपाइँ तपाइँको गोपनीयता सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसोभए तपाईले निश्चित रूपमा NordVPN प्रयोग गर्नु पर्छ।
Third. तेस्रो पक्षलाई बिदाइ
फेसबुक र धेरै अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै कम्पनीहरूलाई तपाईंको डाटा सुरक्षा गर्न भरोसा गर्न सकिँदैन। जे भए पनि, ती तेस्रो पक्षलाई बेच्छन्, र तपाइँ ती सबै विज्ञापनहरू पाउनुहुन्छ। कहिलेकाँही यसले सम्भावित चुहावट निम्त्याउन सक्छ। यसैले, Nordvpn प्रयोग गर्नु यी खतराहरूबाट आफूलाई जोगाउन एक आदर्श निर्णय हुनेछ।
NordVpn कालो शुक्रवार बिक्री:
कालो फ्राइडे बिक्रीले तपाईंलाई सबैभन्दा ठूलो छुट ल्याउँछ, विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्समा। डिजिटल विश्व टेक संसारको हिस्सा हो। तसर्थ, NordVPN एक प्रविधि हो जुन तपाईं मोहित छुटमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गत वर्ष, तीन बर्षे प्याकेज तीन वर्षको प्याकेजको 70०% सम्ममा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो।
थप रूपमा, Nord प्याकेजमा Nord एन्क्रिप्शन खाली टस। त्यसोभए त्यो एक सुपर सेभर सम्झौता थियो — ब्ल्याक फ्राइडे प्राविधिक उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो छुटको साक्षी दिन्छ। यसैले तपाईलाई नोर्ड VPN फेला पार्नुहुनेछ अत्यधिक आकर्षक र सस्तो प्रस्तावहरू यस बर्ष, साथै।
त्यसकारण, यदि तपाइँ तपाइँको गोपनीयता को लागी Nord VPN मा निर्भरता चाहानुहुन्छ भने तपाईले यस बर्षको ब्ल्याक फ्राइडे बिक्रीको लागि हेर्नु पर्छ। यो सीमित हुन सक्छ, त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको आँखा लक्ष्यमा राख्नुहोस् पुरस्कारहरू काट्नको लागि!
तपाईं कसरी छुट पाउन सक्नुहुन्छ?
तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको नर्डको आधिकारिक वेबसाइट जाँच गरिरहनु हो। तपाईं लगातार अपडेटको लागि समाचार पत्रको सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। तिनीहरू चाँडै कालो शुक्रवार बिक्री मिति जारी गर्नेछन्। एकचोटि तपाईंले दिन थाहा पाउनुभयो भने, तपाईं आधिकारिक नोर्ड वेबसाइटको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ र सदस्यता प्रक्रियाबाट जान सक्नुहुन्छ।
Nord लगभग एक दशक को लागी आफ्नो ग्राहकहरु को सेवा रहेको छ। यदि तपाईंले अझै Nord VPN खरीद गर्ने निर्णय गर्नुभएन भने, तपाईंले NordVPN का लागि यस बर्षे ब्ल्याक फ्राइडे सेल बेच्नु हुँदैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो तपाईंले ख्याल गर्ने व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षाको उत्कृष्ट उपहार हो। त्यसैले यदि तपाईंसँग पहिले नै सदस्यताहरू छन्, तपाईं अझै पनि राम्रो सम्झौताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
छुट्टीको मौसम कुनाको वरिपरि हो। तपाईंसँग इष्टतम साइबर सुरक्षा छ भनेर निश्चित गर्न, आफैलाई Nordvpn पाउनुहोस्!
कसरी ट्विटर भिडियो र गिफ डाउनलोड गर्ने?
नि: शुल्क अमेजन उपहार कार्डहरू कसरी प्राप्त गर्ने २०१ 2017
अनन्त युद्धहरूको प्रोमो कोड सूची
www.bloxburg.us र अब कमाउन शुरू गर्नुहोस्
अमेजन उपहार कार्ड सर्वेक्षण कमाउनुहोस्
कुनै साइन अप फिल्म वेबसाइटहरू नि: शुल्क
क्रेडिट कार्ड बिना अमेजन प्राइम प्रयास गर्नुहोस्